Madaxweyne Farmaajo: �Shacabka iyo dowladda waxaa ku jira dad Danley�
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay mucaaradnimada lagu hayo dowladiisa iyo kooxaha ka dambeeya.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayey munaasabad xaley lagu qabtay dugsiga tababbarka booliska e Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in markii la dhisay xukuumadda oo la ansixiyey in koox mucaarad ah ay ku shireen dalka dibadiisa kuwaasoo ku heshiiyey in aysan dhaqaaqin dowladda.
“Annigu Qalbigeyga ayaan ka hadlayaa markii xukuumadda la ansixiyey oo hadda toddobo bilood jirta waxaa lagu shiray dalka dibadiisa oo la yiri “Xukuumaddan waa in la mucaarado, waa in laga horyimaado oo waa mooshin laga keeno waa xaqiiqo, dowladda ma dhallan markiiba waxaa laga horkeenay mucaaradnimo walina waa ay socotaa iyadoo dhaggo iyo indho lahayn, “ayuu yiri Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa arrin sir ah sheegay oo ku saabsan cidda mucaaradka ku ah dowladiisa iyo shir qool loo dhigay dowladii horre ee Xasan Shiikh iyadoo markaas jirta lix bilood.
“Waxa hadda aad arkeysaan afar sanno ka hor way jirtay dowladdii dowladdan ka horreysay iyadoo lix bilood jirta ayaa la ila soo hadlay oo la i yiri waa la mucaaradayaa dowladaas ee ka soo qeybgal waa xaqiiqo waxa idin sheegayo oo waxa aan ku iri dowladdan lix bilood ayey jirtaa oo maxay sameesay oo lagu mucaaradayaa dadka mucaaradka hadda ah howshaas waa ay ku jireen illaah hortiisa ayaan ku dhaartay waxaa ku iri dowladda wakhti hala siiyo waa curdun”ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegya in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad fiican balse ay jiraan dad danleey ah oo lugaha jiidaya dowladda oo raba in dumiyo amniga iyo horumarka dalka.
Hadalka Madaxweynaha ayaa u muuqda mid muujinaya in dowladda ay wajaheyso culeys siyaasadeed oo uga immaanaya siyaasiyiin iyo rag xubno ka ah golayaasha dowladda.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dalkan uu dagaal ku jiro 10 sanno oo xiriir ah balse loo baahan yahay in dadku ay kala gartaan cadowga iyo dadka daacadda u ah.
Madaxweynaha ayaa qiray in dalkan uu lee yahay hal cadow oo ah Al-Shabaab waxa uu digniin u diray kooxo isku dayaya in ay shaki galiyaan duulaanka uu ku dhawaaqay.